निर्वाचन आयोगद्वारा नयाँ मतदाता नामावली सार्वजनिक, हेर्नुहोस तपाईंको नाम छ कि छैन!
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, वैशाख ३ print
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ (२०७३ साल फाल्गुण ९ सम्म १८ वर्ष पूरा भएका) को अन्तिम मतदाता नामावली
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईले भोट दिन पाउनुहुन्छ कि हुन्न?, मतदाता नामावलीमा तपाईँको नाम छ कि छैन? त्यो खुल्दुली लागेको भए यहाँ हामी त्यसको समाधान गर्दैछौ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनअघि विशेष सुरक्षासहितको नयाँ मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्दैछ। 'हामीले चारवटा सुरक्षा फिचरसहितको परिचयपत्र तयार गरेका छौं,' आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सेतोपाटीसँग भने, 'मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएपछि छपाइ सुरु गर्ने छौं।' परिचयपत्रमा मतदाताको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, मतदाता परिचयपत्र नम्बर लगायत विवरण उल्लिखित 'क्युआर कोड' अंकित हुनेछ।
आफ्नो विवरण यहाबाट हेर्नुहोस : Browser does not support IFRAME
आइतबार, बैशाख ३, २०७४ २२:५६:०६